Farta ugu yar ee ugu fiican | Hal-abuurka khadka tooska ah
Isticmaalka qoraal-ku-qorista waligiis naqshad ahaan looguma qaddarin wax ka sarreeya, taas oo liddi ku ah. Doorashada qoraalka, foomamka, ka kooban yahay, waxay leeyihiin a saameyn weyn oo muuqaal ah marka la bilaabayo fariinta dadweynaha. Taasi waa sababta maanta naqshadaynta daabacadu ay tahay farshaxan aad loo qiimeeyo oo ka dambeeya oo ay jirto taariikh dheer.
Maanta waxa aan ku bilaabaynaa in aan u kuur-galo qisada ka danbeysa, si kooban, oo aan idiinku soo xulno xarfaha ugu yar taas oo aan ka maqnaan karin liiska tixraacyada qoraallada.
Si aan u fahanno waxa ku xeeran taariikhda daabacaadda waa in aan dib ugu laabanaa asalkii qoraalka ilaa casrigii dhijitaalka ahaa ee aan maanta ku jirno.
1 Bilawga safarka: taariikhda qoraalka
2 kala soocidda qoraalka
2.1 qoraalka serif
2.2 Nooca nooca sans serif ama sans serif
2.3 Qoraal ama far-gacmeed
2.4 wajiyada qurxinta
3 Farta ugu yar ee ugu yar
Bilawga safarka: taariikhda qoraalka
Waa inaan ku laabanaa qarnigii labaad ee BC ilaa Mesobotamiya, halkaas oo Xardho waxay isticmaaleen feero oo ay dhintaan si ay u xardhaan qaababka xarfaha iyo xarfaha. Xarfaha qadiimiga ah ee Roomaaniga ee loo isticmaalo dhismayaasha waxay u adeegeen dhiirigelinta qaar badan oo ka mid ah qoysaska nooca serif ee aan maanta naqaanno, sida caanka Times New Roman.
Waxaan horay ugu soconnaa waqtiga, oo waxaan joognaa qarnigii laba iyo tobnaad ee Yurub, halkaas oo aan ka helno Xarfaha ugu horreeya ee gacanta lagu qoray oo ay sameeyeen suufiyadoodii oo loogu talagalay qoraal-gacmeedyo iftiin leh kuwaas oo lagu arki karay xarfo qurxoon. Farsamadan waxaa maanta loo yaqaanaa Gothic calligraphy, waxayna ahayd oo ay tahay farsamo xarfo gacan xoog leh.
Taariikhda daabacaadda sida aynu ognahay maanta waxay asal ahaan ka soo jeedaan ikhtiraacida madbacada uu sameeyay Johannes Gutenberg sanadku markuu ahaa 1440-kii, laga sameeyay Germany. Waxa ay ka koobnayd mashiin samayn kara nooca caaryada daabacaadda dambe ee xarfaha. Hal-abuurkani waxa uu suurtageliyay in la daabaco Kitaabka Quduuska ah ee 42-ka ah.
Waxaa mahad leh guusha hal-abuurka, daabacaadda nooca guurguurta ah waxay gaartay Yurub oo dhan, iyada oo nashqaddeeduna la hagaajiyay oo la oggolaaday. dukaamada daabacaadda ee qaaradda oo dhan ka furan.
Shaqooyinka ugu muhiimsan waxaa la bixiyaa qarnigii siddeed iyo tobnaad, halkaas oo typography bilaabay inuu horumariyo horumarinta noocyada kabka, dusha sare ee ay ka shaqeeyeen iyo tayada sare ee khadadka, waxaas oo dhan waxay la macno tahay isbeddelka farshaxanka garaafyada.
Intii lagu jiray qarnigii XNUMX-aad, horumarka tignoolajiyada ayaa si toos ah u saameeyay qoraalka, dhacdada saameynta ugu badan yeelatay waxay ahayd muuqaalka kumbuyuutarrada. Laga bilaabo hadda, nidaamyada macluumaadka ayaa ka caawiyay naqshadeeyayaasha inay fahmaan oo ay abuuraan qoysas badan oo qoraal ah.
kala soocidda qoraalka
Sida aynu ognahay, typography waxaa loo fahmay sida calaamado loo qaabeeyey oo leh qaab garaafyo isku mid ah.
Farshaxanada waxaa loo kala saari karaa siyaabo kala duwan, kiiskan waxaan u sameyn doonaa sida waafaqsan anatomy, sidaas darteed afar qaybood ayaa la kala soocay.
Farqiga ugu muhiimsan ee kooxdan waa isticmaalka serif ee jilayaasha, salkeeda iyo xagga sareba. Asalkiisu wuxuu ka yimaadaa marxaladda dhagaxyada ugu horreeya ee dhagaxyada.
Nooca nooca sans serif ama sans serif
Farshaxannada kooxdan waxaa ka maqan serif, kooda istarooggu waa lebis, jilaaguna waa toosan yihiin. Marka ugu horraysa ee noocaan oo kale ah la arko waa xilligii kacaankii warshadaha ee boodhadhka.
Qoraal ama far-gacmeed
Loo yaqaan farta gacanta, tan iyo isku day in aad ku daydaan qoraalka. Xarfaha badanaa waa la qurxiyaa.
Kooxdan waxaan ka heli doonaa farihii hore loogu talagalay ujeedooyinka qurxinta.
Marka aan ogaano taariikhda qoraal-qoraalka iyo sida loo kala saaro, waxaan kuu dayn doonaa liis xarfaha ugu yar ee ugu fiican ee naqshadahaaga.
Qoraalka daabacaadda ee la dooranayaa waa inuu noqdaa mid waafaqsan astaanta aan ku shaqeyneyno iyo falsafadeeda, sidaas darteed waxay u gudbin doontaa fariinta si sax ah waxayna gaari doontaa dhagaystayaal badan.
Qoraal-qoraalka ugu yar, aad fudud laakiin leh qaab aad u qurux badan. Gaoel waa far sans serif ah oo aad ka heli karto marka laga reebo lambarrada iyo calaamadaha xarakaynta, lahjadaha luqadaha kala duwan. Cilada kaliya ee ka dhalan karta qoraalkan waa in ay jiraan xarfo waaweyn oo keliya.
Farta ugu yar oo fudud ee mashaariicdaada. Waa qorista casriga ah kuwaas oo aad ka heli karto geesinimo iyo joogto labadaba, tirooyinka, calaamadaha xarakaynta, xarfo kale iyo sidoo kale, xarfo waaweyn oo luqado badan ah.
Wajiyada ugu yar ma aha inay noqdaan sans-serif oo kaliya, kiiskan waxaan soo bandhigaynaa nooca Agatha, oo ah nooca qaab gacan-ku-qoran, tusaale ahaan ku dayashada qoraal-fareedka. Waxa ay na siisaa xarfo far waaweyn iyo kuwo yarba, nambarayn iyo calaamado xarakayn.
Waxaa lagu dhisay tirooyinka joomatari, Beckman wuxuu noqonayaa qoraal casri ah oo xoog badan. Qodobka togan ee far-qoristan ayaa ah in uu na siinayo lix miisaan oo kala duwan, dhanka kale, xumaantu waa in ay jiraan xarfo waaweyn oo keliya iyo calaamado kala duwan oo yar.
mid kale ayaan kuu soo bandhigaynaa farta farta ugu yar ee italic taasi waxay ku siin doontaa naqshadahaaga qaab xarrago leh oo dheddig ah.
Qoraal ka tirsan kooxda sans serif. Waa farta la isku koobay laakiin leh ballac xariiq oo caawinaya sharci
Haddii waxa aad raadinayso ay tahay qaab joomatari, halkan waa farta Prime. Qaab joomatari ahaan loo sameeyay oo leh qiime sare oo la akhrin karo labadiisa peso; iftiin iyo joogto ah.
Sans serif font in isku qas xarrago leh kuwa fudud. Waa far ku habboon cinwaannada, madax-madaxeedyada, qoraallada hoose, iwm. Waxay na soo bandhigaysaa saddex miisaan oo far ah: fudud, joogto ah iyo geesinimo. Intaa waxaa dheer, laba xaraf, kuwa sare iyo kuwa hoose, calaamadaha xarakaynta, tirooyinka iyo lahjadaha.
nooca serif-serif xarrago leh. Wuxuu bixiyaa xarfo waaweyn oo keliya. Qodob taban waxaan dhihi doonaa ma laha xarfo yaryar.
Una far aad u dhamaystiran, tan iyo, waxay ina soo bandhigaysaa afar pesos; iftiin, hadh, double iyo geesinimo.
Nooca Sans Serif Condensed. Kelson waxa ku jira lix miisaan iyo xarfo xarfo waaweyn oo keliya, ma jiraan wax calaamado ah.
Xirfadlayaasha adduunka ee farshaxanka garaafyada ayaa had iyo jeer ku jira isbeddel joogto ah, sidaas darteed waxay u baahan yihiin habab cusub oo ay si halabuur leh ula xiriiraan, si aad u gaadho dhagaystayaashaada, iyadoo la kaashanayo qoraalka qoraalka ayaa ah habka ugu cajiibsan ee lagu gaadho.
Ma aha oo kaliya naqshadeeyayaasha waxay ku jiraan isbeddelkan isbeddelka ah, laakiin sidoo kale qoraal-gacmeedka mana joojinayso da'da dijitaalka ah, tan iyo, marxaladdan taariikhda, waxaa jira fursado badan oo kale oo horumarineed oo ay uga mahadcelinayaan horumarka tignoolajiyada ee aan maanta haysanno. maalintii.
Haddii maqaalkani uu kiciyay ma aha oo kaliya maskaxdaada mashaariicda mustaqbalka, laakiin sidoo kale rabitaankaaga inaad ku dhiirigeliso naftaada oo aad sahamiso naqshadaynta adiga, laga bilaabo hal-abuurka internetka waxaanu kugu dhiirigelinaynaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Farta ugu yar ee ugu yar